INHI nezinselelo kuHulumeni - Bayede News
Kusuka uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela uhlelo lwezempilo okuthenjwa ukuthi luzotakula bonke abadonsa kanzima kwezokwelashwa eNingizimu Afrika ngenxa yokungabinawo ama medical aid iNational Health Insurance (NHI), sekube kuningi ukukhuluma ngalolu hlelo, kodwa umbuzo omkhulu ngothi umphakathi okuyiwo olubhekiswe kuwo uyazi yini ngalo.
Sekuphele izinyanga ezine iPhalamende lethula ezithebeni uMthethosivivinywa iNational Health Insurance Bill ukuze umphakathi unikwe ithuba lokubeka uvo lwawo ngalolu hlelo, kodwa akukho okuzwakalayo ngasohlangothini lwawo. UHulumeni uzinqumele unyaka wezi-2026 ukuthi uhlelo lube selusebenza ngokugcwele ezweni lonke. UMengameli uRamaphosa ungene esikhundleni izingxoxo ngokuqala kweNHI sezivele ziphezulu njengoba sekuphele iminyaka eli-11 kudingidwa ngayo, yena akwenzile ukuqinisekisa ukuthi luyaqhubeka. Okuncomekayo akwenzile ukubuyisa eMnyangweni Wezempilo uDkt uZweli Mkhize ongomunye owayesophondweni kuqala izingxoxo zayo. Uma konke kuya ngamagama enkehli ngeNHI, iNingizimu Afrika iyobe iphumelele ukuhamisa ngenkambiso ye-Universal Healthcare Coverage.
Kwesinye sezithangami zasePhalamende lapho uMengameli uCyril Ramaphosa ayekhuluma khona ngalolu hlelo lwezempilo, wathi uNdunankulu ongasekho waseSweden u-Olof Palmer wayekhuluma ngondunankulu wangaphambilini athi walaliswa esibhedlela esithize wangeniswa egumbini elifanayo nomsebenzi owayeqashwe imboni yensimbi, kodwa bathola ukwelashwa okufanayo. Ngokusho kukaRamaphosa nakuleli isimo esinjena sizogcina sesenzeka uma uhlelo lweNational Health Insurance luthola ukwesekwa.
Noma izinto zingeke zifane ncamashi njengoba elakuleli liyizwe elisathuthuka futhi okusenegebe elikhulu kulo ngokwezinhlanga nokuhlaliswa kwabantu. Lokhu kuhlukana kugqama kakhulu emkhakheni wezempilo. Ngokwesitatimende sikaRamaphosa, ngonyaka kusetshenziswa imali eyizigidigidi ezingama-250 kubantu abangamaphesenti ayi-16 abakwazi ukuthola usizo lwezempilo ezibhedlela nasemitholampilo ezimele. Imali eyizigidigidi ezingama-220 isetshenziselwa ukubhekana nezibhedlela zikahulumeni ezithwala lonke uhlobo lomuntu.
Ingqikithi ngeNational Health Insurance ukuthi izokwazi ukufi nyelela kubona bonke abantu baseNingizimu Afrika kungakhathalekile ukuthi isimo sabo somnotho sinjani, bahlwempu noma bacebile, bayasebenza noma abasebenzi. UNgqongqoshe Wezempilo uthi impumelelo yeNHI incike ekubambisaneni nomphakathi nazo zonke izinhlaka ezithintekayo, ngoba kuzobekwa phambili abagulayo nabadala kunalabo okusengozi makhaza kubona nabasakwazi ukuzitabalasela ngenxa yokuvunywa yiminyaka.
“Isiphakamiso esisebenzela phezu kwaso sincike ku-United Nations neWorld Health Organisation njengengxenye yokwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyaluthola usizo lokwelashwa. Iphinde incike kakhulu emazweni ayingxenye ye-Organisation for Economic Coordination and Development (OECD) njenge-Australia, i-Austria, iBelgium, iCanada, iCzech Republic, iDenmark, iFinland, iFrance, iGermany, iGreece, iHungary, i-Iceland okungamanye awo. Wonke lamazwe anezinga eliphezulu lezempilo nomnotho wawo uzinzile futhi uhlelo lweNHI lakwazi ukusebenza kuwo. Lawa mazwe asekwazile ukufi nyelela ku- Universal Healthcare Coverage emhlabeni.
Ngokusho kukaMkhize kunesidingo esikhulu sokuba ezempilo zivuleleke ukuze abantu bakwazi ukungena ngaphansi kohlelo lokwelashwa. Uma kukhona odinga ukuhlinzwa lapho kushintsha khona inhliziyo, kumele alandele uhlelo olukhona angavinjwa ngoba kuthiwa akanawo amandla okukhokhela izindleko zokuhlinzwa,” kuchaza uMkhize.
Isimo esikhona manje ezibhedlela eziningi zikahulumeni oningi lazo ezihanjelwa kakhulu ngaboHlamnga siyashaqisa, futhi zidinga ukulungiswa ingqalasizinda kwandiswe nabasebenzi. Umbuzo omkhulu ukuthi iNHI izosebenza kanjani uma namanje abantu kusamele balinde kolayini abade ezibhedlela ekubeni begula
Kusenenkinga yokuthi ezinye izibhedlela azinabo odokotela, ingasaphathwa eyodokotela abangongoti. Iziguli zibuyiselwa emakhaya ngaphandle kwemishanguzo ngoba iyashoda. Abaphathi bezibhedlela nemitholampilo bakhala ngokuthi isabelomali abanikwa sona siphelela ezandleni.
UNdunankulu wesifundazwe iGauteng uMnu uDavid Makhura wavuma ukuthi uma uHulumeni kuzwelonke engasilungisi isimo ezibhedlela, kuzoba lukhuni satshe ukuthi uhlelo lweNHI lusebenze kulesi sifundazwe.
Walibeka ngembaba elokuthi esikhundleni sokuthi izibhedlela zibe izikhungo zosizo, seziphenduke amakhaza ngoba abantu bayafa.
Isibonelo salokhu yisibhicongo esenzeka eLife Esidimeni okwabe kuyisikhungo sezempilo sabantu abakhubazeke ngomqondo, lapho kwashona khona abali-143 ngonyaka wezi- 2016. Ngaphandle kwalezi ziga, ziningi nezinye ezibikwayo zinsuku zaphuma lapho kuhlukunyezwa khona iziguli.
Izibalo ezakhishwa ngonyaka wezi- 2017 nguMnyango Wezempilo eGauteng zaveza ukuthi uhamba phambili ngokukhokhela abantu ngobudedengu bezibhedlela njengoba wase ukhokhe izigidigidi ezili-18.6, ulandelwe i-Eastern Cape ngezigidigidi ezili-16.7 kulandele isifundazwe iKwaZulu-Natal ngezigidigidi ezi-9.2
INHI izoqala ukusebenza ngokuhlukaniswa izigaba ezintathu esikhathini esiyiminyaka eli-14 kusuka ngonyaka wezi-2026. Ngalolu hlelo kuzothengwa imithi esezingeni eliphezulu nabantu banikwe usizo lokwelashwa olusezingeni. ISouth African Revenue Service (SARS), izobamba iqhaza elikhulu ekuqoqeni intela kuzona zonke izindawo lapho ingakwazi khona ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zalolu hlelo. UMnyango kaMgcinimafa nawo uba neqhaza elimqoka kulokhu, ngoba yiwo ozokhomba lapho kumele kuqoqwe khona intela. Zonke izikhungo zezempilo ongabe zizimele okanye ezingaphansi kukaHulumeni kuzophoqa ukuthi zibe sezingeni eliphezulu.
Ngokusho kukaMkhize uHulumeni uzokwenza konke ukuqinisekisa ukuthi imitholampilo nezibhedlela zihlinzekwa ngesibalo esanele sabasebenzi.
Abasebenzi bezempilo bazoqeqeshwa ukuze bakwazi ukubhekana nazozonke izimo futhi nemishanguzo izotholakala ngendlela akukho lapho abantu bezobuyiselwa khona emakhaya ngoba intuleka. Uma uHulumeni ehluleka ukulungisa zonke lezi zethembiso kuyofana nokuthi kusiniswa amahleza neNHI iyogcina ngokungaphumeleli. Kukhona konkem lokhu, isikhalo esikhulu siqhamuka kubelaphi bendabuko abathi bashiywa ngaphandle ezinhlelweni zeNHI. Bathi yibo abasebenzisana kakhulu nabantu ngaphambi kokuya ezibhedlela, ngakho ulwazi lwabo lungasiza uma kwenziwa izinhlelo eziya phambili